Ramamimampionona G: “Aoka tsy hokorontanina…” | NewsMada
Ramamimampionona G: “Aoka tsy hokorontanina…”
“Aoka, tsy ny fifidianana nandalo no hanakorontanana ny fiarahamonina. Vita iny ny fifidianana. Izay voafidy eo, solombavambahoakan’i Madagasikara iombonantsika rehetra. Mialoha izay, aleo hanjaka ny fahamarinana.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, ny amin’ny hetsi-pitakiana momba ny voka-pifidianana solombavambahoaka. Mila atao ao anatin’izay fahamarinana izay ny porofo mazava. Rehefa misy porofo mazava: izay no mameno ny fahamarinana. Manahirana raha hitabataba fotsiny tsy misy porofo.
Ilaina ny fanadihadiana
Inona no mety mahatonga ilay fitakiana: mety misy lamina tsy nipetraka tsara ve tao, na misy zavatra voahodinkodina, na zon’olona very, na halatra… ? “Amin’ny maha CFM anay, anisan’ny mila apetraka ny fandraisana andraikitra sy ny fahamarinana”, hoy izy. Tokony hiara-dalana izay amin’izao zotram-pifidianana izao.
Manana andraikitra amin’izany ny mpifidy, ireo kandidà, ny antoko na vondrona politika nanolotra azy, ireo mpikirakira voka-pifidianana… Rehefa milamina tsara avokoa ireo ao anatin’ny fahazavana amin’ny fandraisana andraikitra, tsy tokony hisy izay fitakiana izay.
Tsy tokony hisy ny korontana
Nametraka ny solontenany isaky ny birao fandatsaham-bato ve ireo kandidà, ohatra? Nananan’ny tena ve ny porofo? Misy fandraisana andraikitra efa tokony ho napetraka tany aloha, fa tsy aty aoriana vao hoe misy an’itsy na iroa. Raha tena dinihina ka hoe misy halatra ary voaporofo mazava, zon’ny rehetra ny mitondra ny raharaha any amin’izay fahefana tomponandraikitra ny amin’izany. Antsoina koa ny fahefana tomponandraikitra hanao ny fahamarinana.
“Inona no tokony hikorontanantsika rehetra amin’izany? Efa tokony hialana kosa raha sanatria hoe mandrovi-tsihy fotsiny ka hanakorontana”, hoy ihany izy. Adin’ombalahin’ny mpianakavy io. Ao amintsika mianakavy avokoa na ny mpijery, na ny omby nampiadiana, na ny kianja niadiana… Tokony hilamina isika rehetra hoe vita iny ny adin’ombalahin’ny mpianakavy.